ट्याक्सी भन्दा महंगो भाडा तिरी गाडी चढ्छन् बाजुराबासी, १ किलोमिटरको भाडा कति ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
ट्याक्सी भन्दा महंगो भाडा तिरी गाडी चढ्छन् बाजुराबासी, १ किलोमिटरको भाडा कति ?
२० कात्तिक, बाजुरा । जिप व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्न अझै रोकेका छैनन् । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने जिल्लाको पिलुचौरदेखि कालिकोटको जितेगडासम्मको ६५ किलोमिटर बाटोमा रु दुई हजार ५०० सम्म भाडा लिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा १ किलोमिटरको भाडा ३८ रुपैयाँ ४६ पैसा पर्न जान्छ । महङ्गो भाडा जिपमै तिर्नु यात्रुका लागि बाध्यता जस्तै छ । जिप प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले भनेअनुसार भाडा तिर्नुपरेको यात्रुको दुखेसो छ ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पछिल्लो भाडादरमा १९ किलोमिटर भन्दा बढी ट्याक्सीमा यात्रागर्नुपरेको प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तिनुपर्ने प्रावधान छ । यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागबीचको छलफलले २०७५ असोज ७ गतेदेखि लागूहुनेगरी यो भाडादर तोकेको थियो । तर बाजुराबासी भने १ किलोमिटरकै ३८ रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरिरहेका छन् ।
उक्त बाटोमा एक यात्रुबाट रु दुई हजार ५०० सम्म भाडा असुली गर्ने गरेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक उद्धवसिंह भाटले बताए । यात्रुको चापको मौका छोपी व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिने गरेका छन् । मार्तडीदेखि धनगढीसम्म ३ सय २७ किलोमिटर यात्रा गर्दा रु एक हजार २०० भाडा रहेकामा कच्ची बाटोका नाममा छोटो दूरीमै खुलेआम रकम असुल्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सदरमुकाम मार्तडी–कोल्टी, मार्तडी–डोगडी, मार्तडी–घटमुनासहित कर्णाली करिडोर सडकमा पनि व्यवसायीले खुलेआम यात्रुबाट भाडा लिने नाममा बढी पैसा असुली गर्ने गरेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाले कर्णाली करिडोरमा प्रतिकिमी रु ११ लिने निर्णयसमेत गरेको थियो । सो मूल्य जोड्दा पिलुचौरदेखि जितेगडासम्मको रु ७१५ हुन्छ, तर यहाँ निर्णयको भन्दा तेब्बर रकम असुली जिप व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् । रासस
Previousनेपालमै यस्तो ! मदिरा बेच्नेलाई १०, खानेलाई ५ हजार जरिवाना
Nextझाडीमा उत्तानो पर्‍यो कार, तीनजनाको मृत्यु